News - beautyma mma nke ihe ohuru, usoro ohuru nke “n'icheputa” China
Mma nke ihe ohuru, ohuru nke “n'icheputa” China
N'ehihie nke ọnwa iri na asaa nke ọnwa iri na asaa nke Disemba 17, ememme asọmpi a na-eme kwa afọ na ọgbakọ akpọrọ '' '' '' '' '' '' '' 'NW] na nnọkọ nkwukọrịta nke China, nke China Made Network na China Council na-akwalite maka International Trade (CCPIT), emere na Nanjing Greenland Zipong Intercontinental Hotel. SGS, BV, TUV Nande, ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ na-emeri emeri na ụlọ ọrụ mgbasa ozi kachasị wee gbakọta na Jinling iji gbaa ama maka emume a dị ebube emere na China. E gosipụtara ụfọdụ n'ime ngwaahịa mmeri ahụ n'ememe ọdịda.
N'oge nke ọ pụta ìhè, ụlọ ọrụ 49 nwere ngwaahịa 57 na-egbu maramara.
Nhọrọ nke “Mma nke Nmepụta” nke China jiri anya siri ike nyocha ndị a na-eme China, na-achọ ngwaahịa kachasị ọnụ ahịa; Site na ịrịọ ngwaahịa na Jenụwarị rue nyocha nke mbido na Ọktoba, ngụkọta nke ngwaahịa 5,917 natara. Mgbe nyocha nke mbụ gasịrị, ngụkọta nke ngwaahịa 458 batara ọkwa nyocha ikpeazụ, mgbe ahụ, a na-eme nyocha ahụ site na njikwa ngwaahịa, uru ọhụụ, mmekọrịta mmadụ na kọmputa, nchekwa na nchebe gburugburu ebe obibi, mmetụta aesthetic na akụkụ ndị ọzọ. N’ikpeazụ, ngwaahịa 57 kacha mma na ụlọ ọrụ iri ise na itoolu meriri ebe mbụ.
Ndị otu Fujian Fenan Aluminom pụtara ma nweta ihe nrite ahụ.
"Ihe ọhụrụ dị ndụ, ihe ochie bụ ọhụụ; ihe ọhụrụ ga-agabiga, ihe ochie ga-eme njem." Site na ndị mmadụ ruo mba, olee otu anyị ga-esi ruo ebe anyị na-aga? Kedụ ka anyị ga - esi gbaghalata mmepe ma kwagide "n'uko"? Azịza ya bụ 'imeghe' ahịa ma mee nkwalite ndị nwere obi ike.
FOEN Fen 'na-elekwasị anya na ijikọta ike ọhụrụ na ụlọ ọdịnala, iweta teknụzụ ọhụrụ, ụdị ọhụụ, echiche ọhụụ na ọrụ ọhụụ na ahịa, na-ahụ asọmpi dị iche, melite mmetụta ika, na-agbasa olu ndị China mgbe niile n'ụwa, na -eme ụwa hụrụ n'anya na-Made-China.